Haddii aad doonayso inaad iibsato gaari loo Intaa waxaa dheer in ay qabanayaan dheecaanada kale in aan ku soo jeediyay in aad hubiso, waxa kale oo aad u baahan tahay si aad u hubiso ka bareegyada baabuurta. Biriigyada gaari jira hal wax oo loogu talagalay in ay duugoobin. Waxaa khilaaf ka dhexeeya rotor iyo pads in joojiyo gaadhiga marka aad biriiga. Haddii labada gaballada iyo cajalladaha looga dhigay ka mid ah birta ka sii qallafsanaaday ma waxaad ka heli doono wax kasta oo awood joojinta. In this article aan dabooli doonaa hubinta joojiyaha hore ee baabuurta iyo baabuur.
On baabuurta cusub la afartoodaba furan waxay noqon kartaa si caddaalad ah u fudud in ay helaan kana dayi wax si deg deg ah ee xaaladda biriiga. The joojiyaha hore meel u dhaxaysa yihiin 60 iyo 70 boqolkiiba awood aad la joojiyo. Marka ugu horraysa ee aad u socdaan ilaa gaariga aad eegi kartaa ka rotors jejebiyey hore iyagoo eegaya iyada oo qar iyo hubinta xaaladda rotors ah. Hubi in gaariga aan la kala eryay, haddii kale waxay noqon doonaan si ay u kulul inay taabtaan. Waxaan rajeyneynaa in afartoodaba ay u furan yihiin oo ku filan si aad u heli kartid kana dayi wax wanaagsan u sameeya kuwa ugu. Isku day inaad aragto haddii aad ku aragto wax baahi intaa guud ahaan rotor ah. Haddii aad ku eekaan kartaa fartaada iyada oo qar ka kale oo aad dareemi kartaa rotor ah si loo ogaado haddii ay jiraan baahi intaa guud ahaan rotor ah. Haddii ay jiraan, waxaa jira fursad wanaagsan oo gaariga u baahan doontaa shaqo jejebiyey ah ugu dhaqsaha badan. Haddii rotor waa wax fiican oo siman markaa taa waa tuse wanaagsan joojiyaha waa in qaab wanaagsan.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa in la furo surta iyo hubi dheecaan jejebiyey. Waxaa jira sidoo kale tilmaame heerka dibaddeeda oo koonbo weyn dheecaan jebin ah, ama waxaa jira ul maquufin furka filler ah. Hubi in dheecaanka uu yahay xadka ku cad. Haddii ay yar tahay waxay noqon kartaa tilmaame kale oo gaariga u baahan yahay shaqo jejebiyey ah. Sida gaballada xiran, pistons ee calipers ay gaadhsiisnaataa fogaanaya oo u baahan isticmaalka dheecaan ka badan.
Hadda ka hor tago oo u hesho in gaariga oo u soo jeesan suuroggalaan ku saabsan, laakiin ma gaariga bilaabi. Qaado ogeysiis ah oo dhan ee nalalka tilmaame ku dumisaan ah. gaariga ma nuurka haysataan ABS ama iftiin jejebiyey? Light ABS yahay biriiga Anti-qufulka iyo ku hoos jira xaalad aad u daran Fariin shuqliyay awood Fariin inay giraangirood oo kale in ay sii gaariga ka soo galay taraarax ah. Light Tani waa inta badan jaalaha ah ku dumisaan iyo a “Jejebiyey” light badanaaba waa casaan. Hadda bilaabi gaariga iyo hubi in nalalkaas baxo. Haddii ay dami, ka dibna wax kasta oo nidaamka kala jejebiyey waa in si shaqeeya. Haddii light ABS ama biriiga light weli, ka dibna nidaamka kala jejebiyey waa u baahan adeegyada.
Next, aad rabto in aad ka hor tago oo la wado gaariga. Inta aad gaadhiga wado biriiga iyo ogeysiis qaado sida waxa isteerinka falaa. Gaariga ma sii wadi inay galaan xariiq toosan, ama uusan soo jiid hal dhinac ama mid kale. Gaadhiga waa in ay sii wadaan in ay xariiq toosan, haddii uu jiidayo in labada dhinac midkood ama qof kale oo markaas hal dhinac oo biriiga la shaqeeya dhib badan oo kale oo ay muujinaysaa in loo baahan yahay adeeg kala jejebiyey ah. Waxa kale oo aad rabto in aad maqli halka codsanaya biriiga. Ma waxay u ciyaan jiriqsiga ama buuq ku shiidi? Haddii ay qeylyo waa tilmaame in shaqo jejebiyey ah waxaa u sabab ah. Gawaari badan ayaa hadda ku qalabaysan waxa loo yaqaan “Squealers” on pads jejebiyey. Waxaa loo qorsheeyay in markii gaballada hoos xirtaan dhibic gaar ah “squealer” taabto rotor ah kuu gaariga u baahan pads oo kaa caawineysaa ka rotors ah. Haddii aad maqli shiidi – iyo sidoo kale waxa ay hubaal u baahan yahay si ay u tagaan garaash u leedahay in joojiyaha eegay.
On baabuurta cusub in aad ayaa ka fiirsaneysa inay wax gadashada, waxa kale oo aad ka dalban kartaa a gaari Warbixinta taariikh si ay u arkaan haddii gaariga ayaa la hayo ganacsadaha iyo haddii ay muujinaysaa waqtiga loogu talagalay adeegyada. Si kastaba ha ahaatee, gaariga aan laga yaabaa in lagu hayo ganacsadaha si diiwaanadan ma laga yaabaa in la heli karo. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aadan iibsan, aad si aad u weydiiso haddii aad qaadan kartaa gaariga si aad makaanik deegaanka in la hubiyaa ka baxay inuu ku siiyo a piece yar ee maskaxda.
Tags: hubinta joojiyaha, gaari Warbixinta taariikh